Baarlamaanka oo diiday in lagu laabto kuraasta 8-Xildhibaan oo muran galay | Arrimaha Bulshada
Home News Baarlamaanka oo diiday in lagu laabto kuraasta 8-Xildhibaan oo muran galay
Baarlamaanka oo diiday in lagu laabto kuraasta 8-Xildhibaan oo muran galay
Bulsha:- Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta diiday go’aankii ka soo baxay Maxkamadda sare ee dalka ee ahaa in dib loogu noqdo doorashada 8-dii kursi ee muranka ka taagnaa.
Xildhibaanada ayaa difaacay xubnaha 8-da Xildhibaan ee kuraastooda muranka la geliyay, kuwaasoo muddooyinkii u dambeeyay si caadi ah uga qeyb galayay fadhiyad Baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliya waxaa uu maanta go’aamiyey in natiijadii doorashada 275-ta xildhibaan ee sanadkii 2016, ay tahay mid xalaal ah oo kama danbey ah, mana jirayso buu yiri Goluhu wax doorasho dib loogu celinayo.
Go’aanka waxaa uu ahaa mid cod loo qaaday sida caadada ah marka uu Goluhu go’aamo gaarayo, cod la geliyey suggida xubinnimada iyo qaabka booska lagu weyn karo , waxaa ogolaaday 180xildhibaan , halka ay ka aamuseen 4xildhibaan.
Golaha waxaa uu sidoo kale ka hadlay in sababta keliya ee doorashada loogu celin karo ay tahay 6-da qodob.
1-Xubinta oo Geeriyoota.
2-Xubinta oo ay la soo gudboonaato xaalad xilgudasho la’aaneed joogta ah.
3-Xubinta oo istaqaalad u gubdisa aqalka ay xubinta ka tahay, laguna ogolaado.
4-Ka-maqnaashiyo labo kalfadhi oo caadi ah, iskuna xiga ayada oo aaney jirin sabab maangal ah.
5-Haddii ay xubinta aqbasho xil dowladeed aan wasiir aheyn.
6-Haddii la hakiyo xuquuqdiisa muwaadinnimo, sida ku cad sharciga.